ခရစ်ယာန်ဂရိကျမ်းစောင်မှာပါတဲ့ ဘုရားသခင့်နာမည် | NWT
တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန် (יהוה) နဲ့​ဖော်​ပြတဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​ဟာ မူ​ရင်း​ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​တွေ​မှာ အကြိမ် ၇,၀၀၀ နီး​ပါး ပါ​မှန်း ကျမ်း​ပညာ​ရှင်​တွေ အသိ​အမှတ်​ပြု​ကြ​တယ်။ မူ​ရင်း​ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ​တော့ နာ​မတော်​မပါ​ဘူး​လို့ အများ​စု ယူ​ဆ​ကြ​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် ခေတ်​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း​အများ​စု​ထဲ​က ဓမ္မ​သစ်​ကျမ်း​မှာ ယေဟောဝါ​ဆို​တဲ့​နာ​မည်​ကို အသုံး​မပြု​ကြ​ဘူး။ ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​တွေ​ထဲ​က တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန်​ပါ​တဲ့ ကျမ်း​ပိုဒ်​တွေ​ကို ဘာ​သာ​ပြန်​တဲ့​အခါ​မှာ​တောင် ဘာ​သာ​ပြန်​သူ​အများ​စု​က ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​အစား “သခင်” ဆို​တဲ့ စကား​လုံး​ကို အသုံး​ပြု​ကြ​တယ်။
ကမ္ဘာ​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း​က​တော့ အဲဒီ​ထုံး​စံ​ကို မလိုက်​ဘူး။ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ ယေဟောဝါ​ဆို​တဲ့​နာ​မည်​ကို ၂၃၇ ကြိမ် အသုံး​ပြု​ထား​တယ်။ ဒီ​လို​လုပ်​ဖို့ ဆုံး​ဖြတ်​ရာ​မှာ ဘာ​သာ​ပြန်​သူ​တွေ ထည့်​စဉ်း​စား​တဲ့ အဓိ​က​အချက် နှစ်​ချက်​က​တော့– (၁) အခု​ခေတ်​ဂရိ​ကျမ်း​စာ​မူ​တွေ​ဟာ မူ​ရင်း​စာ​မူ​တွေ မဟုတ်​ဘူး။ အခု​ခေတ် ကျမ်း​စာ​မိတ္တူ ထောင်​ပေါင်း​များ​စွာ​ထဲ​က အများ​စု​ကို မူ​ရင်း​ကျမ်း​စောင်​တွေ ရေး​သား​ပြီး​နောက် အနည်း​ဆုံး အနှစ်​နှစ်​ရာ​ကြာ​မှ ကူး​ရေးခဲ့​တယ်။ (၂) အဲဒီ​လို​ကူး​ရေး​ချိန်​မှာ ကျမ်း​ကူး​သူ​တွေ​က တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန်​ကို “သခင်” ဆို​တဲ့ ဂရိ​စကား​လုံး ကီ​ရီ​အော့စ္စ​နဲ့ အစား​ထိုး​ခဲ့​ကြ​တယ်။ ဒါ​မှ​မဟုတ် အစား​ထိုး​ပြီး​သား စာ​မူ​တွေ​က​နေ ကူး​ရေးခဲ့​ကြ​တယ်။
မူ​ရင်း​ဂရိ​ကျမ်း​စာ​မူ​တွေ​မှာ တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန် ပါ​ကို​ပါ​တယ်​လို့ ကမ္ဘာ​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း​ကော်​မတီ ဆုံး​ဖြတ်​ခဲ့​တယ်။ အောက်​ပါ​အချက်​တွေ​ကို အခြေ​ခံ​ပြီး ဆုံးဖြတ်​တယ်–
ယေရှု​နဲ့​တမန်​တော်​ခေတ်​တုန်း​က အသုံး​ပြု​ခဲ့​တဲ့ ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​မိတ္တူတွေ​မှာ တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန် ပါ​တယ်။ အရင်​တုန်း​က ဒီ​အချက်​ကို တ​ချို့ လက်မခံ​​ကြ​ဘူး။ အခု​တော့ ပထ​မရာ​စု​တုန်း​က​အသုံး​ပြု​တဲ့ ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​မိတ္တူတွေ​ကို ကွာ​ရန်​မြို့​ဟောင်း​မှာ ရှာ​ဖွေ​တွေ့​ရှိ​ခဲ့​တဲ့​အတွက် အဲဒီ​အချက်​ကို လက်ခံ​လာ​ကြ​ပြီ။
ယေရှု​နဲ့​တမန်​တော်​ခေတ်​တုန်း​က ဂရိ​စကား​နဲ့​ပြန်​ဆို​ထား​တဲ့ ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​တွေ​မှာ​လည်း တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန် ပါ​တယ်။ ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​တွေ​ကို ဂရိ​လို​ဘာ​သာ​ပြန်​ထား​တဲ့ ဂရိ​စက်ပ်တွား​ဂျင့်​ကျမ်း စာ​မူ​တွေ​မှာ တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန်​မပါ​ဘူး​လို့ ကျမ်း​ပညာ​ရှင်​တွေ ယူ​ဆ​ခဲ့​တာ ရာ​စု​နှစ်​များ​စွာ ရှိ​ပြီ။ ၂၀ ရာ​စု​အလယ်​ပိုင်း​မှာ ကျမ်း​ပညာ​ရှင်​တွေ​က ယေရှု​လက်​ထက်​က ဂရိ​စက်ပ်တွား​ဂျင့်​ကျမ်း​အပိုင်း​အစ အဟောင်း​တ​ချို့​ကို လေ့​လာခဲ့​ကြ​တယ်။ အဲဒီ​ကျမ်း​အပိုင်း​အစ​တွေ​မှာ ဟီဘရူး​ အက္ခရာ​နဲ့ ရေး​ထား​တဲ့​နာ​မတော် ပါ​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် ယေရှု​ခေတ်​တုန်း​က ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မိတ္တူတွေ​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည် ပါ​တယ်။ အေဒီ​လေး​ရာ​စု​ရောက်​တော့ ကို​ဒက် ဗက်တီ​ကင်​နဲ့ ကို​ဒက် ဆိုင်း​နိုင်း​တိ​ကပ်စ် စ​တဲ့ အထင်​က​ရ ဂရိ​စက်ပ်တွား​ဂျင့်​စာ​မူ​တွေ​မှာ ကမ္ဘာဦး​ကျမ်း​က​နေ မာလခိ​ကျမ်း​အထိ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည် မပါ​တော့​ဘူး (အစော​ပိုင်း စာ​မူ​တွေ​မှာ​တော့ ပါ​တယ်)။ အဲဒီ​အချိန်​က​စ​ပြီး ထိန်း​သိမ်း​လာခဲ့​တဲ့ စာ​သား​တွေ​ထဲ​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည် မပါ​တော့​တဲ့​အတွက် ဂရိ​ကျမ်း ဒါ​မှ​မဟုတ် ဓမ္မ​သစ်​ကျမ်း​မှာ နာ​မတော်​ကို မတွေ့​ရ​တာ အံ့သြ​စ​ရာ မဟုတ်​ဘူး။
‘ကျွန်​တော်​ဟာ အဖဘု​ရား​ရဲ့​ နာ​မည်​နဲ့ ရောက်​လာ​တာ’ လို့ ယေရှု​ပြော​ခဲ့။ “အဖဘု​ရားရဲ့​ နာ​မည်​ကို သုံး​ပြီး” သူ​လုပ်​ ဆောင်​တယ်​လို့​လည်း ပြော​ခဲ့
ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​အကြောင်း ယေရှု မကြာ​ခ​ဏ​ပြော​ဆို​ပြီး တ​ခြား​သူ​တွေ​ကို​လည်း ပြော​ပြခဲ့​တယ်​လို့ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ ဖော်​ပြထား​တယ်။ (ယောဟန် ၁၇:၆၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၂၆) ယေရှု​က ‘ကျွန်​တော်​ဟာ အဖဘု​ရားရဲ့​နာမည်​နဲ့ ရောက်​လာ​တာ’ လို့​ပြော​ခဲ့​တယ်။ “အဖဘု​ရားရဲ့​နာ​မည်​ကို သုံး​ပြီး” သူ​လုပ်​ဆောင်​တယ်​လို့​လည်း ပြော​ခဲ့​တယ်။—ယောဟန် ၅:၄၃။ ၁၀:၂၅။
စွမ်းအား​တော်​လမ်း​ညွှန်​မှု​နဲ့ ရေး​ထား​တဲ့ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​ဟာ ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​တွေရဲ့ ဖြည့်​စွက်​ချက်​ဖြစ်​တဲ့​အတွက် ဂရိ​ကျမ်း​မှာ ယေဟောဝါ​ရဲ့​နာ​မည် မပါ​တော့​ဘူး​ဆို​ရင် ရှေ့​နောက်​မညီ​ဘူး။ အေဒီ​ပထ​မရာ​စု အလယ်​ပိုင်း​လောက်​မှာ တ​ပည့်​ယာကုပ်​က “ဘု​ရား​သခင်​က လူမျိုး​ခြား​တွေ​ကို သတိ​ရ​ပြီး နာ​မတော်​အတွက် သူတို့​ထဲ​က​နေ လူ​တွေ​ကို ရွေး​ချယ်​လိုက်​တဲ့​အကြောင်း ရှု​မောင် အသေး​စိတ် ပြော​ပြခဲ့​ပြီ” ဆို​ပြီး ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့ အကြီး​အကဲ​တွေ​ကို ပြော​ခဲ့​တယ်။ (တမန်​တော် ၁၅:၁၄) ပထ​မရာ​စု​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​ကို ဘယ်​သူ​မှ မသိ​ဘူး၊ မသုံး​ဘူး​ဆို​ရင် ယာကုပ် အဲဒီ​လို​ပြော​မှာ မဟုတ်​ဘူး။
ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ ဘု​ရား​သခင်​ရဲ့ အတို​ကောက်​နာ​မည် ပါ​တယ်။ ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၊ ၃၊ ၄၊ ၆ မှာ​ပါ​တဲ့ “ဟာ​လေ​လု​ယ” ဆို​တဲ့​စကား​လုံး​မှာ ဘု​ရား​သခင်​ရဲ့ အတို​ကောက်​နာ​မည် ပါ​တယ်။ အဲဒီ​စကား​လုံး​က “‘ယ’ ကို​ချီး​မွမ်း​ကြ” လို့​အဓိပ္ပာယ်ရ​တဲ့ ဟီ​ဘ​ရူး​စကား​လုံး​က​နေ ဆင်း​သက်​လာ​တယ်။ “ယ” ဆို​တာ ယေဟောဝါ​ရဲ့ အတို​ကောက်​နာ​မည်​ပဲ။ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ​ပါ​တဲ့ နာ​မည်​အများ​စု​ရဲ့​အဓိပ္ပာယ်​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည် ပါ​တယ်။ ယေရှု​နာ​မည်​ဟာ “ယေဟောဝါ​ဟာ ကယ်​တင်​ခြင်း” ဆို​တဲ့ အဓိပ္ပာယ်​ရှိ​တယ်​လို့ အကိုး​အကား​စာပေ​တွေ​မှာ ရှင်း​ပြထား​တယ်။
ဂျူး​ခ​ရစ်​ယာန်​စာပေ​တွေ​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​အသုံး​ပြု​ခဲ့​ကြောင်း အစော​ပိုင်း ဂျူး​စာပေ​တွေ​က ဖော်​ပြတယ်။ အေဒီ ၃၀၀ လောက်​မှာ ရေးသား​ပြီး​စီး​တဲ့ နှုတ်​တိုက်​ပညတ်​ပေါင်း​ချုပ် (Tosefta) မှာ ဥ​ပုသ်​နေ့​မှာ​မီး​ရှို့​ခံ​ရ​တဲ့ ခရစ်​ ယာန်​စာပေ​တွေ​နဲ့​ပတ်​သက်​ပြီး အခု​လို​ပြော​တယ်– “သတင်း​ကောင်း​ဟော​သူ​တွေ [ယေရှု​အကြောင်း​ရေး​သား​တဲ့ ခ​ရစ်​ယာန်တွေ] နဲ့ မီ​နင်မ်တွေ [ဂျူး​ခ​ရစ်​ယာန်လို့ ယူ​ဆ​ရ​သူ​တွေ] ရဲ့​စာ​အုပ်​တွေ​ကို မီး​ရှို့​ခဲ့​ကြ​တယ်။ အဲဒီ​စာ​အုပ်​တွေ​ထဲ​မှာ​ပါ​တဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မတော်​ကိုး​ကား​ချက်​တွေ​လည်း မီး​ရှို့​ခံ​ခဲ့ရ​တယ်။” အေဒီ​ဒုတိ​ယ​ရာ​စု​အစော​ပိုင်း​မှာ အသက်​ရှင်​ခဲ့​တဲ့ ဂါ​လိ​လဲ​နယ်​သား ရဗ္ဗိ​ယို​စေး​ရဲ့​စကား​ကို​လည်း ပညတ်​ပေါင်း​ချုပ်​မှာ အခု​လို​ကိုး​ကား​ထား​တယ်– သီ​တင်း​ပတ်​ရဲ့ တ​ခြား​နေ့​တွေ​မှာ “[ခ​ရစ်​ယာန်​စာပေ​တွေ​ထဲ​က] နာ​မတော်​ပါ​တဲ့ ရည်​ညွှန်း​ချက်​တွေ​ကို ဖြတ်​ထုတ်​သိမ်း​ထား​ပြီး ကျန်​တဲ့​အပိုင်း​တွေ​ကို​တော့ မီး​ရှို့​လိုက်​တယ်။”
ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​ထဲ​က ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​ကိုး​ကား​ချက်​တွေ​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည် ပါ​ပုံ​ရ​တယ်​လို့ ကျမ်း​ပညာ​ရှင်​တ​ချို့ အသိ​အမှတ်​ပြု​ကြ​တယ်။ အဘိ​ဓာန်​တစ်​အုပ်​ရဲ့ “ဓမ္မ​သစ်​ကျမ်း​ပါ တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန်” ဆို​တဲ့ ခေါင်း​စဉ်​အောက်​မှာ “ဓမ္မ​သစ်​ကျမ်း​ကို စတင်​ပြု​စု​ချိန်​တုန်း​က ဓမ္မ​ဟောင်း​ကျမ်း ကိုး​ကား​ချက်​တ​ချို့ ဒါ​မှ​မဟုတ် အားလုံး​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မတော် ယာ​ဝေး​ဆို​တဲ့ တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန် ပါဝင်​ကြောင်း အထောက်​အထား​တ​ချို့ ရှိ​တယ်” လို့​ဖော်​ပြထား​တယ်။ ကျမ်း​ပညာ​ရှင် ဂျော့ဂ်ျ​ဟား​ဝ​ဒ်​က “ပထ​မရာ​စု ခ​ရစ်​ယာန်တွေရဲ့ ကျမ်း​စာ​ဖြစ်​တဲ့ ဂရိ [စက်ပ်တွား​ဂျင့်]ကျမ်း မိတ္တူတွေ​မှာ တက်​တြာ​ဂရမ် ပါ​ဝင်​နေ​ဆဲ​ပဲ။ ဒါ​ကြောင့် ဓမ္မ​သစ်​ကျမ်း​ရေး​ သူ​တွေ​က ဓမ္မ​ဟောင်း​ကျမ်း​က​နေ ကိုး​ကား​တဲ့​အခါ တက်​တြာ​ဂရမ်​ကို အသုံး​ပြု​ခဲ့​ကြ​တယ်​လို့ ယူ​ဆ​နိုင်​ပါ​တယ်” လို့​ပြော​တယ်။
လေး​စား​ထိုက်​တဲ့ ကျမ်း​စာ​ဘာ​သာ​ပြန်​တွေ​ဟာ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည် အသုံး​ပြု​ခဲ့​ကြ​တယ်။ အဲဒီ​ဘာ​သာ​ပြန်​သူ​တ​ချို့​က ကမ္ဘာ​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း မထုတ်​ဝေ​ခင်​က​တည်း​က ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​ကို အသုံး​ပြု​ခဲ့​ကြ​တယ်။ ဘာ​သာ​ပြန်​သူ​တ​ချို့​နဲ့ သူတို့​ပြန်​ဆို​တဲ့​ကျမ်း​တွေ​က​တော့– ဟာ​မန် ဟိန်း​ဖီ​တာ​ရဲ့ ဗာ​တီ​ကန်​ကျမ်း စာ​မူ​မှ​ပြန်​ဆို​ထား​သော . . . ဓမ္မ​သစ်​ကျမ်း လုံး​ကောက်​ပြန်​ဆို​ချက် (၁၈၆၃)၊ ဘင်​ဂျ​မင် ဝီ​လ​ဆင်​ရဲ့ အဲန်း​ဖက်​တစ် ဒိုင်ဂလော့​ထ် (၁၈၆၄)၊ ဂျော့ဂ်ျ ဘာ​ကာ စ​တီ​ဗင်​ရဲ့ ခေတ်​သုံး​အင်္ဂလိပ်​ဘာ​သာ​စကား​ဖြင့် ပေါလု​၏​မှာ​တမ်း​စာ (၁၈၉၈)၊ ဒ​ဘ​လျူ ဂျီ ရပ်​သဖော့​ဒ်ရဲ့ ရော​မမြို့​သား​များ​အတွက် စိန့်​ပေါလ်၏​မှာ​တမ်း​စာ (၁၉၀၀)၊ လန်​ဒန်​ပုပ်​ရ​ဟန်း​မင်း ဂျေ ဒ​ဘ​လျူ​စီ​ဝမ်ဒ်ရဲ့ ဓမ္မ​သစ်​ကျမ်း​စာ​စောင်​များ (၁၉၄၆) တို့​ဖြစ်​တယ်။ ဒါ့​အပြင် ၂၀ ရာ​စု​အစော​ပိုင်း စပိန်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း​မှာ ဘာ​သာ​ပြန်​သူ ပါ​ဘ​လို ဘီ​စင်​က လုကာ ၂:၁၅ နဲ့ ယုဒ ၁၄ မှာ “ယေဟောဝါ” ဆို​တဲ့​နာ​မည်​ကို သုံး​ထား​ပြီး အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက် ၁၀၀ နီး​ပါး​မှာ​လည်း ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​ကို ဖော်​ပြခဲ့​တယ်။ တ​ကယ်​ဆို​ရင် အဲဒီ​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း​တွေ​မတိုင်​ခင် အရင်​က​တည်း​က နာ​မတော်​ကို အသုံး​ပြု​ခဲ့​ကြ​တယ်။ ၁၆ ရာ​စု​က​စ​ပြီး ဟီ​ဘ​ရူး​လို ပြန်​ဆို​ထား​တဲ့ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ တက်​တြာ​ဂရမ်​မီ​တန်​ကို တော်​တော်​များ​များ အသုံး​ပြု​ထား​တယ်။ ဂျာ​မန်​စကား​တစ်​ခု​တည်း​မှာ​ပဲ ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း ၁၁ ကျမ်း​က​ ခရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ “ယေဟောဝါ” ကို အသုံး​ပြု​တယ်။ (ဒါ​မှ​မဟုတ်​ ဟီဘရူး​စကား​ လုံး “ယာ​ဝေး” ကို အက္ခရာလှယ်​ထား​တယ်။) ဘာ​သာ​ပြန်​သူ ၄ ယောက်​က​တော့ “သခင်” ဆို​တဲ့​စကား​လုံး​နောက်​မှာ နာ​မတော်​ကို လက်သည်း​ကွင်း​နဲ့ ဖော်​ပြပေး​တယ်။ ဂျာ​မန်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း ၇၀ ကျော်​က​လည်း အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက်​တွေ ဒါမှ​မဟုတ် ရှင်း​ပြချက်​တွေ​မှာ နာ​မတော်​ကို အသုံး​ပြု​ထား​တယ်။
ဘင်​ဂျ​မင် ဝီ​လ​ဆင်​ရဲ့ အဲန်း​ဖက်​တစ် ဒိုင်​ဂလော့​ထ် (၁၈၆၄)၊ တမန်​တော် ၂:၃၄ မှာ​ပါ​တဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်
ဘာ​သာ​စကား​ပေါင်း တစ်​ရာ​ကျော်​နဲ့ ပြန်​ဆို​တဲ့ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည် ပါ​တယ်။ အာ​ဖရိ​က၊ အမေရိ​က၊ အာ​ရှ၊ ဥ​ရော​ပနဲ့ ပစိ​ဖိတ်​ကျွန်း ဘာ​သာ​စကား​များ​စွာ​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​ကို တွင်​တွင်​ကျယ်​ကျယ် အသုံး​ပြု​ထား​တယ်။ (စာ​မျက်​နှာ ၂၅၀၆၊ ၂၅၀၇ မှာ​ပါ​တဲ့ စာ​ရင်း​ကို​ကြည့်။) အဲဒီ​ကျမ်း​တွေ​ကို ဘာ​သာ​ပြန်​သူ​တွေ​ဟာ အထက်​ပါ​အကြောင်း​ရင်းတွေ​ကြောင့် ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​ကို အသုံး​ပြု​ခဲ့​ကြ​တယ်။ မကြာ​သေး​ခင်​က​ထုတ်​ဝေ​ခဲ့​တဲ့ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စာ​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ ရို​တူ​မန်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း (၁၉၉၉) ရဲ့ အခန်း​ငယ်​ပေါင်း ၄၈ ခု​မှာ​ “ဂျီဟို​ဗာ” ကို ၅၁ ကြိမ်၊ အင်​ဒို​နီး​ရှား​က ဘာ​တပ်​ခ် (တို​ဘာ) ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း (၁၉၈၉) မှာ “ယေ​ဟို​ဝါ” ကို အကြိမ်​ပေါင်း ၁၁၀ အသုံး​ပြု​ထား​တယ်။
ဟာ​ဝိုင်ယီ​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း၊ မာကု ၁၂:၂၉၊ ၃၀ မှာ​ပါ​တဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်
ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ ယေဟောဝါ​ဆို​တဲ့ နာ​မည်​ကို ပြန်​လည်​ထည့်​သွင်း​ဖို့ ခိုင်လုံ​တဲ့​အကြောင်း​ရင်း ရှိ​တာ အသေအချာ​ပါ​ပဲ။ ကမ္ဘာ​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း​ကို ဘာ​သာ​ပြန်​သူ​တွေ​လည်း အဲဒီ​အတိုင်း လုပ်​ခဲ့​ကြ​တယ်။ သူတို့​က ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မတော်​ကို အလွန်​ရို​သေလေး​စား​ကြ​တယ်။ မူ​ရင်း​ကျမ်း​မှာ​ပါ​တဲ့ အရာ​တစ်​ခု​ခု​ကို ဖယ်​ရှား​ရ​မှာ​ကို​လည်း ကြောက်​ရွံ့​ကြ​တယ်။—ဗျာဒိတ် ၂၂:၁၈၊ ၁၉။
ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​ရဲ့ စာ​ကိုယ်​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာမည်​ပါ​တဲ့ ဘာ​သာ​စကား​များ
က​လန်​ဂါ– Yehova; Yahwe
ကာလာ လာ​ဂေါ်​ယာ– Iehovan
ချင်း (ဟား​ခါး)– Zahova
ဂီ​ဘာ​ရီ​အို (ကီ​ရီ​ဝူ ဒေ​သိ​ယ​စကား)– Iehova
ဂျာ​မန်– Jehovah; Jehova
စ​ပိန်– Jehová; Yahvé; YHWH; Yahweh
ဆာ​ကာ​အို– Ihova; Iehova
ဆူ​ကူ​မာ– Yahuwa; Jakwe
ဇူ​လူး– Jehova; YAHWE
တ​စွာ​နာ– Jehofa; Yehova; Yehofa
တီ​ကီ အီ​ဘူ– Yawe
တို​အာ​ရီ​ပီ– Jehova; Iehova
တွန်​ဂန်– Jihova; Sihova
ထဲမ်​နီ– Yehṓfa; Yehofa
နာ​ဂ၊ ကွန်​ယက်– Jihova
နာ​ဂ၊ စန်ဂ်​တမ်– Jihova
နာ​ဂ၊ မာ​အို– Jihova
နာ​ဂ၊ မြောက်​ပိုင်း ရမ်​မာ– Jihova
နာ​ဂ၊ လို​တာ– Jihova
နာ​ဂ၊ အန်​ဂမီ– Jihova
နဲန်​ဂုမ် (ဒါ​မှ​မဟုတ် မာ​ရေ)– Iehova
ပြင်​သစ်– IHVH, yhwh
ဘာ​တပ်​ခ် (တို​ဘာ)– Jahowa
မာ​လ​ဂက်​စီ– Jehovah; Iehôvah
မီ​ဇိုး– Jehovan; Jihova’n
မက်​ဖောင်​ငူ (မြီနီ ဒေ​သိ​ယ​စကား)– Jehova
မစ္စ​မာ ပန်​နေ​တီ– Iehova
ရာ​ရို​တွန်​ဂါ– Jehova; Iehova
လို​မွန်​ဂို– Yawe; Yova
ဟို​ချန့်ခ် (ဝင်​နီ​ဘာ​ဂို)– Jehowa
အီ​လီ​ခူ (လူ​ဆန်​ဂို ဒေ​သိ​ယ​စကား)– Yawe
အက်​ဖိတ် (မြောက်)– Yehova
(ဒီ​စာ​ရင်း​မှာ​မပါ​တဲ့ ဘာ​သာ​စကား အတော်​များ​များ​မှာ​လည်း အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက် ဒါ​မှ​မဟုတ် ရှင်းပြ​ချက်​တွေ​မှာ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်​ကို အသုံး​ပြုကြ။)
ဘာ​သာ​စကား​ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ခရစ်ယာန်ဂရိကျမ်းစောင်မှာပါတဲ့ ဘုရားသခင့်နာမည်
nwt စာ. ၂၅၀၄-၂၅၁၁